Các mẫu tủ lạnh giá rẻ dưới 3 triệu được ưa chuộng hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Các mẫu tủ lạnh giá rẻ dưới 3 triệu được ưa chuộng hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Các mẫu tủ lạnh giá rẻ dưới 3 triệu được ưa chuộng hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Okwamanje abasebenzisi abaningi bacabanga ukuthenga Iziqandisi ezishibhile ezingaphansi kwe-3 million VND akulula. Nokho, ungabheka esihlokweni esilandelayo ukuze uthole ulwazi oluwusizo lwalokhu kukhathazeka!
1 Imikhiqizo yesiqandisi eshibhile engu-5 ephezulu ngaphansi kwe-VND eyizigidi ezi-3
1.1 1. Isiqandisi se-aqua amalitha angama-50 AQR-D59FA BS
1.2 2. Isiqandisi se-Electrolux 85 litres EUM0900SA
1.3 3. Isiqandisi se-Aqua amalitha angu-90 AQR-D99FA BS
1.4 4.Isiqandisi Electrolux 46 amalitha EUM0500SA/SB
1.5 5. Intengo yesiqandisi 3 million Midea 93 litre HS-122SN
2 Amanye amafriji abiza izigidi ezi-3-5 akhethwa ukuthi athenge okuningi kwa-HC
2.1 1. I-Sharp Inverter engu-150 litre yesiqandisi SJ-X176E-SL
2.2 2. Isiqandisi se-Aqua 130 amalitha AQR-T150FA BS
2.3 3. Isiqandisi se-Panasonic Inverter 167 litres NR-BA189PPVN – isiqandisi esishibhile esingaphansi kwe-3 million VND
Imikhiqizo yesiqandisi eshibhile engu-5 ephezulu ngaphansi kwe-VND eyizigidi ezi-3
Nazi ezinye izinhlobo zeziqandisi ezingaphansi kwezigidi ezingu-3 (amafriji amancane) esiwaqoqile ngesikhathi esifushane kakhulu:
1. Isiqandisi se-aqua amalitha angama-50 AQR-D59FA BS
Ifriji elincane le-Aqua 50 litre linomnyango owodwa ovuleka kalula kakhulu ukuze uthole izinto. Usayizi omncane uvumela abasebenzisi ukuthi banyakaze futhi bashintshe izikhundla kalula.
Amakamelo ahlelwe ngokwesayensi nangokunengqondo:
Igumbi lesiqandisi lekhabhinethi lenzelwe ukugwema ukuxuba iphunga nokunye ukudla, ngakho ungaqiniseka lapho ugcina ukudla okusha. Igumbi eliyinhloko kanye negumbi lephiko lihlelwe ngamathreyi anengqondo, okwenza indawo yokugcina ibe ngcono.
Ukulungiswa kwezinga lokushisa okusheshayo nokulula:
I-knob yokulawula izinga lokushisa inamazinga anemininingwane futhi acacile, ungaphinda ukhethe kalula ukufanisa izinga lokushisa elidingekayo lokugcina.
Ubuchwepheshe bokupholisa okuqondile bugcina ukudla kukusha
Isiqandisi se-Aqua AQR AQR-D59FA BS sisebenzisa ubuchwepheshe bokupholisa obuqondile, umoya obandayo uphephethwa ngokulinganayo yonke indawo esiqandisini ukuze usize ukupholisa ngokushesha, ukusebenza kahle, ukugcina ukudla kukusha, umkhawulo wokucubungula. Ngenxa yalokho, ikhabhinethi idla ugesi omncane kakhulu lapho isebenza, yonga izindleko zanyanga zonke kubasebenzisi.
>> Buka imininingwane yesici: Isiqandisi se-Aqua 50 amalitha AQR-D59FA BS
2. Isiqandisi se-Electrolux 85 litres EUM0900SA
Umklamo ohlangene, ukunyakaza okuguquguqukayo. Iminyango yekhabethe ecwebezelayo, ewubukhazikhazi bensimbi engenasici iqinisekisa ubuhle bendawo yakho yokuhlala. Ngaphezu kwalokho, izinto zensimbi engagqwali nazo zandisa ukuqina kwekhabhinethi. Umkhiqizo mncane ngosayizi, ngakho kulula ukuwuhambisa futhi ungabekwa ezindaweni ezifanele endlini yakho ngaphandle kokuthatha indawo enkulu.
Yonga ezindlekweni zikagesi
Isiqandisi se-Electrolux 85 amalitha EUM0900SA enye ye Iziqandisi ezishibhile ezingaphansi kwe-3 million VND Abafundi abaningi banentshisekelo yokusebenzisa kuphela u-0.55 kW/ngosuku (203.56KHW/ngonyaka) ukukusiza ukuthi wonge izindleko zikagesi zanyanga zonke, ikakhulukazi kulabo abahlala ezindaweni zokulala, ezinamanani aphezulu kagesi.
Isistimu yokupholisa eqondile
Isiqandisi esincane se-Electrolux sisebenzisa isistimu yokupholisa eqondile, ehlinzeka ngokupholisa okusheshayo nokugcina ugesi. Lolu hlelo alusebenzisi isiphephetha-moya ukusiza ikhabethe lisebenze kahle, ngaphandle kokukhipha umsindo wabalandeli.
Isiqandisi esinesivalo sokuqeda iphunga
Naphezu komthamo waso omncane kanye nomklamo womnyango ongu-1, isiqandisi se-Electrolux 85 litre EUM0900SA sisenegumbi elincane lesiqandisi elinesivalo, elikusiza ukuthi ulondoloze u-ayisikhilimu, noma ukudla okusha okufana nenyama nenhlanzi ngaphandle kokukhathazeka ngephunga.
Qaphela: Isiqandisi sinamandla okwenza iqhwa kodwa asinamandla futhi isikhathi sokwenza iqhwa sizoba side kunesesiqandisi esihlukile.
Igumbi lemifino elihlukile
Igumbi lezithelo nemifino libanzi kakhulu ukukusiza ukuthi ugcine izithelo nemifino emisha isikhathi eside, unciphisa ukulahlekelwa kwamanzi okubangela ukushwabana nokulahlekelwa amavithamini emvelo.
Ukulungiswa kwezinga lokushisa okulula nokulula
Ngenkinobho yokulawula izinga lokushisa, abasebenzisi bangakhetha izinga lokushisa elilungile lohlobo ngalunye nenani lokudla ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kahle kokulondoloza. Izibani zikwenza kube lula ukubona, ukuhlela nokubuyisa izinto ngaphakathi kwekhabethe ngisho nasebusuku.
Amashalofu esayensi navumelana nezimo
Isiqandisi se-Electrolux 85 litre EUM0900SA sinosayizi omncane, kodwa sihlelwe ngamashalofu esayensi, esiza ekwandiseni indawo yokubeka nokwandisa isikhala ngethreyi elivulekile, eliqinile lomnyango.
>> Bona izici ezinemininingwane: Isiqandisi se-Electrolux 85 litres EUM0900SA
3. Isiqandisi se-Aqua amalitha angu-90 AQR-D99FA BS
Idizayini ehlangene, kulula ukuyihambisa
Isiqandisi se-Aqua AQR-D99FA BS singesomugqa wesiqandisi esincane esinomnyango ongu-1, ikhabethe linomklamo omuhle, igobolondo lensimbi eliqinile, kulula ukulihlanza. Ngosayizi wayo ohlangene, abasebenzisi bangakwazi futhi ukuhambisa ikhabhinethi kalula uma kunesidingo sokushintsha izindawo.
Ukupholisa okusheshayo uhlelo oluqondile lokupholisa
Lesi siqandisi esincane se-Aqua sisebenzisa ubuchwepheshe bokupholisa obuqondile. Lobu buchwepheshe busebenza ngesimiso sokuthi umoya obandayo uphephethwa ngokuqondile ezindaweni eziningi ezihlukene esiqandisini, uqinisekisa ukupholisa okusheshayo, ukusebenza ngokuthula, nokugcina ukudla kukusha. Ikakhulukazi, isiqandisi esishibhile esingaphansi kwezigidi ezintathu ze-Aqua AQR-D99FA BS sisebenzisa ugesi ngokwengayo kakhulu, okubaluleke kakhulu kubantu abahlala lapho amanani kagesi ephezulu.
Igumbi lemifino ukugcina umswakama ufanelekile
Ingxenye yemifino ehlukene ikhawulela ukulahlekelwa umhwamuko wamanzi, igcina imifino ngaphakathi ihlanzekile isikhathi eside ngaphandle kokulahlekelwa imisoco.
Ithreyi yokugcina ingilazi eqinile ehlala isikhathi eside futhi ephephile
Amakamelo angaphakathi ifriji I-Aqua 90 litres AQR-D99FA BS yenziwe ngengilazi epholile esezingeni eliphezulu, ithwala kufika ku-100kg. Abasebenzisi bangaqiniseka lapho begcina ukudla okuningi ngaphandle kokukhathazeka ngokuqhekeka. Ithreyi yengilazi ekhishwayo kulula ukuyihlanza, iqinisekisa ukuphepha kokudla.
Ukulungiswa kwezinga lokushisa okusheshayo nokulula
Igumbi leqhwa elinesivalo ukuvimbela iphunga
Yize kuyisiqandisi esincane esinomklamo omncane, i-Aqua AQR-D99FA BS isafakwe negumbi elincane lesiqandisi elinesivalo ukuze kuqinisekiswe ukuthi akukho phunga lokudla, ungaqiniseka ukuthi ulondoloza ukudla okusha.
>> Buka imininingwane yesici: Isiqandisi se-Aqua 90 amalitha AQR-D99FA BS
4.Isiqandisi Electrolux 46 amalitha EUM0500SA/SB
Idizayini encane, elula. Imibala ewubukhazikhazi, yonga isikhala ngesizotha, ayithathi indawo yokuhlala eningi.
Ukonga amandla okusebenzayo
Ngokusetshenziswa kwamandla okungaba ngu-0.55 KW/ngosuku kuphela (ugesi ongu-0.5/ngosuku), kusiza ukukhulisa ukonga amandla kubasebenzisi, kwehlisele ukukhathazeka kwezindleko zikagesi zanyanga zonke.
Isistimu yokupholisa eqondile ehlanganiswe khona kanye esiqandisini esishibhile ngaphansi kwe-VND eyizigidi ezi-3
Isiqandisi se-Electrolux I-46 litres EUM0500SA/SB ifakwe isistimu yokupholisa eqondile ukuze isize isiqandisi siphole ngokushesha, iqinisekisa ukuthi ukudla kuhlala kukusha. Ngaphezu kwalokho, isiqandisi esincane se-Electrolux sisebenza ngokushelela ngaphandle kokuthinta eminye imisebenzi yakho.
Easy lokushisa ngokwezifiso
Iphaneli yokulawula itholakala ngaphakathi kwesiqandisi esinamaphiko angu-1 ukuze ikusize wenze ngokwezifiso izinga lokushisa elifanele kalula ngokuya ngohlobo nenani lokudla okufanele ligcinwe. Ngenxa yalokho, ukusebenza kahle kokupholisa kugcina ukudla kukusha isikhathi eside.
Ithreyi lengilazi eliqinile eliqinile
Isiqandisi se-Electrolux EUM0500SA/SB sifakwe ithreyi yengilazi epholile ukukusiza ukuthi ugcine ukudla okuningi ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi kuphukile.
>> Bona izici ezinemininingwane: Isiqandisi se-Electrolux 46 litres EUM0500SA/SB
5. Intengo yesiqandisi 3 million Midea 93 litre HS-122SN
Idizayini encane futhi ecoceke kakhulu
Isiqandisi seMidea 93 litres HS-122SN sinomklamo omncane futhi ococeke kakhulu, lesi siqandisi sizosiza ukonga isikhala esikhulu segumbi lakho.
Ubuchwepheshe bokupholisa okuqondile
Lena indlela ethandwayo futhi sekuyisikhathi eside isetshenziswa eziqandisini zesimanje. Ngomgomo we-convection futhi ukhiqize umoya obandayo ohlukene ezindaweni ezahlukene. Ngenxa yalokho, isiqandisi sidale ukugeleza komoya opholile, okusiza ukupholisa ukudla.
Uma sisebenza, lesi siqandisi asibangi imisindo enamandla njengezinye iziqandisi ezivamile, ngakho siyasiza ekunciphiseni umsindo, sidale indawo yokuphumula ukuze uthenge isiqandisi esishibhile esingaphansi kwezigidi ezintathu.
Xem Thêm Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM GB giá tốt, có trả góp | Muasalebang
Igumbi lefriji elihlukile lisiza ukunciphisa ukusabalala kwephunga kwezinye izingxenye
Indawo yemifino ehlukene igcina imifino nezithelo kusha
Kodwa-ke, bonke banobubi obuvamile bokuthi bafanelekela kuphela indawo yokuhlala yabafundi, amagumbi okulala omndeni noma amagumbi ebhizinisi lamahhotela. Ngokungeziwe kuziqandisi ezishibhile ezingaphansi kwezigidi ezi-3, siphinde sabelane ngomugqa wamafriji omba eqolo.
Amanye amafriji abiza izigidi ezi-3-5 akhethwa ukuthi athenge okuningi kwa-HC
Ezinye iziqandisi zibiza kusuka ku-3-5 million noma ngenye indlela Isiqandisi esingaphansi kwe-5 million VND inomthamo omkhulu, efanelekela izidingo zemindeni eminingi
1. I-Sharp Inverter engu-150 litre yesiqandisi SJ-X176E-SL
– Isiqandisi esibukhali SJ-X176E-SL siwumugqa wesiqandisi esineminyango emi-2, enobubanzi obungama-54cm, ngakho-ke sifaneleka kakhulu emakamelweni amakhishi amancane, ukonga isikhala. Idizayini enombala wesiliva kanokusho yenza kube lula ukuhlanganisa nanoma iyiphi indawo yangaphakathi.
– Isiqandisi esibukhali SJ-X176E-SL ongeke ukwazi ukusicabanga ngentengo Iziqandisi ezishibhile ezingaphansi kwe-3 million VND Ukusebenzisa isihlungi esinama-molecule e-Ag + (Isiliva) ukuze kuqede iphunga ngempumelelo, kusiza ukugcina umoya esiqandisini uhlanzekile, unciphise iphunga elingemnandi ukuze ukudla kuhlale kukusha.
– Amashalofu aguquguqukayo, ukuthwala okuhle
>> Buka imininingwane yesici: Sharp Inverter 150 litre friji SJ-X176E-SL
2. Isiqandisi se-Aqua 130 amalitha AQR-T150FA BS
– Idizayini ehlangene, okwenza kube lula ukuhlela noma kuphi ngendlela othanda ngayo, ifanele izindawo zasekhishini ezincane. Ngomthamo wamalitha ayi-130, indawo yesiqandisi engamalitha angama-36, indawo yesiqandisi ingamalitha angama-94, ungaqiniseka lapho ugcina ukudla okwanele okubalulekile komndeni wakho omncane. Khonkotha Isiqandisi se-Aqua Yenziwe ngensimbi eqinile, eqinile, kulula ukuyihlanza.
– Isiqedaphunga esibulala amagciwane i-Nano Fresh Ag +
– Igumbi lemifino lenzelwe ukuvalwa, ukugcina umswakama odingekayo, ukuvimbela ukulahlekelwa kwamanzi emifino. Imifino izogcina ukunambitheka kwayo okusha isikhathi eside.
– Ifaneleka ngethreyi yengilazi epholile kanye nezibani ze-LED ezonga amandla
>> Buka imininingwane yesici: Isiqandisi se-Aqua 130 amalitha AQR-T150FA BS
3. Isiqandisi se-Panasonic Inverter 167 litres NR-BA189PPVN – isiqandisi esishibhile esingaphansi kwe-3 million VND
Idizayini yesimanje, imibala emihle, ukusika imininingwane eyeqile, ilula kodwa isentekenteke. Isibambo somnyango esihle, esihle, esilungele ukusetshenziswa. I-elegant silver grey color scheme, kulula ukuyihlanganisa nezikhala eziningi zangaphakathi ezihlukene. Isiqandisi esinezicabha ezi-2 sePanasonic sinefriji evamile ephezulu, usayizi ohlangene wokonga isikhala.
– Ubuchwepheshe be-Inverter obuhlanganiswe nenzwa ye-Econavi buthuthukisa ikhono lokonga amandla
– Susa amagciwane, iphunga, ugcine umoya omusha ngenxa yobuchwepheshe be-Ag Clean
– Ukupholisa ngokushesha nangokulinganayo ngobuchwepheshe bePanorama
– Ithreyi lengilazi eliqinile neliqinile
>> Bona izici ezinemininingwane: Isiqandisi se-Panasonic Inverter 167 amalitha NR-BA189PPVN
Lawa amafriji amancane anemiklamo emihle, ehlaba umxhwele. Ngenani elithengekayo kakhulu, nokonga ugesi, lezi ziqandisi ziwukukhetha ukonga ngokwedlulele kumuntu ngamunye.
Siyabonga ngokubuka nokwabelana ngalezi Iziqandisi ezishibhile ezingaphansi kwe-3 million VND. Ngethemba ukuthi ukhetha ukuthenga umkhiqizo owanelisayo.
[Review] Máy giặt mini Xiaomi loại nào tốt và nên mua nhất? | Muasalebang
[Review] Top 12 Quạt Điều Hòa Tốt Chính Hãng Bán Chạy Nhất | Muasalebang